2019-12-26 Tamin'ny 24 desambra 2019, ny vondrona Hebei Xueruisha Group dia niara-niasa tamin'ny Hebei Hongan Law Firm mba hanampiana ny mahantra ary nandeha tany amin'ny Shanggeer Village, County Quyang, mba hanome palitao, vary sy menaka mitentina 80 000 yuan. ...
Xiong'an Distrikan'ny vondrona Xue Ruisha ao amin'ny Distrika vaovao "Konferansa momba ny fifohazana Sherisa"
Mpanoratra: Li Ying Tamin'ny faran'ny fialantsasatry ny Fetiben'ny Lohataona dia nanomboka dian-taona vaovao ilay orinasa! Ny fanombohana tsara dia ny antsasaky ny ady. Tamin'ny 5 martsa 2018, nampiantrano ny filohan'ny vondrona comp ...
2017-08-28 Fikirizana sy fikatsahana mpisava lalana Ity dia lehilahy manana tantara. Miaraka amin'ny fikirizana mafy, toe-tsaina tsy milefitra, ary saika fanenjehana saika mafy loha, ny lalana eo ambanin'ny tongony dia feno fanantenana foana, ary mandroso am-pilotra izy ... A ...